cele – Page2– Real Posts News
အောင်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီး မြောင်တောင်နည်းပြသစ် ဘယ်လိုမှတ်ချက်ပြုခဲ့လဲ ???
အောင်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီး မြောင်တောင်နည်းပြသစ် ဘယ်လိုမှတ်ချက်ပြုခဲ့လဲ ??? ပွဲထွက်ကစားခွင့်မရရှိတဲ့အတွက် အခွင့်အရေးရပါက မြောင်တောင်အသင်းက ထွက်ခွာလိုတယ်လို့ အောင်သူ က ထုတ်ဖော်ပြောကြားထားခဲ့တာပါ။ ထိုင်းလိဂ်-၁ကလပ်မြောင်တောင်အသင်းရဲ့နည်းပြဂါမာဟာ အသင်းကိုစတင်တာဝန်ယူခဲ့တဲ့နေ့မှာတင် စီနီယာ ကစားသမားအများစုကို တွေ့ဆုံခဲ့သလို မြန်မာ့လက်ရွေးစင်တိုက်စစ်မှူးအောင်သူနဲ့လည်း တွေ့ဆုံကာ အနာဂ တ်အခြေအနေများတိုင်ပင်ခဲ့ခြင်းနဲ့အတူ အခုထက်ပိုပြီးစွမ်းဆောင်နိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ မှတ်ချက်ပြုခဲ့မှုကို ထိုင်း မီဒီယာတွေက ဖော်ပြသွားခဲ့ပါတယ်။ မြောင်တောင်အသင်းအနေနဲ့ ရာသီဝက်ပွဲစဉ်များပြီးဆုံးခါနီးအထိ ရလဒ်ကောင်းရရှိရန် ရုန်းကန်နေခဲ့ရပြီး တန်း …
ONE Championship တွင် မြန်မာကစားသမားများ ချန်ပီယံ ဖြစ်နိုင်ချေ အလားအလာ
ONE Championship တွင် မြန်မာကစားသမားများ ချန်ပီယံ ဖြစ်နိုင်ချေ အလားအလာ ONE Championship ပြိုင်ပွဲတွင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင် ခဲ့ဖူးသည့် မြန်မာ ကစားသမား အများအပြား ရှိခဲ့ပြီး လက်ရှိတွင်လည်း ပွဲအရေအတွက်နှင့် စာချုပ်ချုပ်ဆို ယှဉ်ပြိုင်နေသည့် ကစားသမားများ ရှိကြသည်။ သို့သော် အဆိုပါ ကစားသမားများထဲတွင်ချန်ပီယံခါးပတ်ရရှိခဲ့ဖူးသည့်ကစားသမားဟူ၍မစ်ဒယ်ဝိတ်နှင့်လိုက်ဟဲဗီးဝိတ်ဝိတ်တန်းနှစ်တန်းချန်ပီယံအောင်လအန်ဆန်တစ်ဦးသာရှိနေသည်။ထို့ကြောင်ကျန်ကစားသမားများအနေဖြင့်လည်း၎င်းတို့ ဝိတ်တန်းတွင် ချန်ပီယံ ဖြစ်နိုင်ချေ အလားအလာ မည်မျှအထိ …
“Myanmar Idol မှာ အန်ကယ် မပါနိုင်တော့လို့ ပရိသတ်တွေ အတွက် စိတ်မကောင်းဘူ လို့ ​ပြောလာတဲ့ ဦးသိန်းတန်​
“Myanmar Idol မှာ အန်ကယ် မပါနိုင်တော့လို့ ပရိသတ်တွေ အတွက် စိတ်မကောင်းဘူး။ တေးချစ်သူတွေ ရဲ့ မေတ္တာက လေးလေးနက်နက် ရှိမှန်း သိသာပါတယ်။ အန်ကယ်လည်း ၀မ်းနည်းပါတယ်” လို့ပြောလာတဲ့ Myanmar Idol ဒိုင်အဟောင်း မြန်မာပြည် သိန်းတန် ။ Myanmar Celebrity TV Update: #MyanmarPyiTheinTan #MyanmarIdol "Myanmar …
မီးမရှိတဲ့ ရွာကနေ ကျူရှင်မယူဘဲ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း ဝိဇ္ဇာဘာသာတွဲကို မြန်မာတစ်ပြည်လုံး ပထမ ရရှိသော တောက်တဲ့ရိုး (အ.ထ.က) ကျုံပျော်မြို့ နယ်မှ မသဇင်ဝင်းအား ​ငွေကျပ်​ သိန်း ၅၀ ချီးမြင့်​
မီးမရှိတဲ့ ရွာကနေ ကျူရှင်မယူဘဲ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း ဝိဇ္ဇာဘာသာတွဲကို မြန်မာတစ်ပြည်လုံး ပထမ ရရှိသော တောက်တဲ့ရိုး (အ.ထ.က) ကျုံပျော်မြို့ နယ်မှ မသဇင်ဝင်းအား ပုသိမ်မြို့မြေနုလမ်း မှဒေါက်တာ မောင်မောင်သန်းနှင့်ဒေါက်တာအေးအေးမြင့်တို့ ၏ နိုင်ငံခြားမှသူငယ်ချင်းက သမီးလေးအတွက် ကျပ်ငွေသိန်းငါးဆယ်ကျပ်ကို ဂုဏ်ပြု ချီးမြှင့်ကြောင်း သိရပါတယ် #Myanmar Online News Credit
Winner ကို ဘယ်လိုအချက်၊အရည်အချင်းတွေ ကြည့်ပြီး ဆုံးဖြတ်သွားမယ်ဆိုတာ ပြောလာတဲ့ ဒိုင်သုံးဦး
Winner ကို ဘယ်လိုအချက်၊အရည်အချင်းတွေ ကြည့်ပြီး ဆုံးဖြတ်သွားမယ်ဆိုတာ ပြောလာတဲ့ ဒိုင်သုံးဦး မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲများစွာထဲမှ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံး သာမက ပြည်ပမှ ပရိသတ်တွေပါ စိတ်ဝင်တစား အားပေးခြင်းကို ခံထားရတဲ့ သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲကြီးကတော့ Myanmar Idol သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲကြီး ပဲဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခဲနက် အားပေးသူ ပရိသတ်တွေ များစွာ ရှိတဲ့ Myanmar Idol ပွဲကြီးဟာဆိုရင် နှစ်တိုင်း …
ဝတ်မှုံရွှေရည်ကို အိမ်ထောင်အမြန်ကျဖို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်တဲ့ စင်ရော်မောင်မောင်
ဝတ်မှုံရွှေရည်ကို အိမ်ထောင်အမြန်ကျဖို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်တဲ့ စင်ရော်မောင်မောင် “တိမ်တွေပေါ်ကပန်း” ရိုက်ကူးရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ ညစာစားပွဲလုပ်ရင်း ဝတ်မှုံရွှေရည်အတွက် ဆုတောင်းစကားပေးခဲ့ပါတယ်။ ဦးမောင်ရဲ့ ဆုတောင်းစကားကိုလည်း အားလုံးက ထောက်ခံထားတာနော်။ ￼Photo : ဝတ်မှုံရွှေရည် IG အကယ်ဒမီ စင်ရော်မောင်မောင်က သရုပ်ဆောင် ဝတ်မှုံရွှေရည်ကို အိမ်ထောင်အမြန်ကျပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးခဲ့တာပါ။ ကိုရီးယားမှာ “တိမ်တွေပေါ်ကပန်း” ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးပြီးလို့ ဂုဏ်ပြုပွဲလေး လုပ်ရင်း ဝတ်မှုံရွှေရည်ကို စင်ရော်မောင်မောင်က …
ထိုင်းနိုင်ငံက နာမည်ကြီး မင်းသမီး ဘာရောဂါမှမရှိ ကျန်းမာရေးကောင်းနေရာကနေ ရုတ်တရက် သေဆုံး
ထိုင်းနိုင်ငံက နာမည်ကြီး မင်းသမီး ဘာရောဂါမှမရှိ ကျန်းမာရေးကောင်းနေရာကနေ ရုတ်တရက် သေဆုံး ထိုင်း TV နဲ့ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် နမ့်(မ)သန် သစတား (သကြား ကြယ်ပွင့်လေး)အသက်( ၂၈) နှစ်ဟာ ဘာရောဂါမှမရှိ ကျန်းမာရေးကောင်းနေရာကနေ နှာခေါင်းနဲ့ပါးစပ်ကနေ သွေးယိုစိမ့်ထွက်လာပြိး သတိလစ်သွားခဲ့လို့ အရေးပေါ်ဆေးရုံတင်ခဲ့ရပြီးသုံးရက်အကြာမှာ သေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ နာမည်အရင်း ဘူစဒါ ထောင်ကြူ …
ဆေးကုသမှု ခံယူနေရတဲ့ ထက်ထက်ဆီ သွားအားပေးခဲ့တဲ့ ဒီဇိုင်နာ မျိုးမင်းစိုး — သရုပ်ဆောင် ထက်ထက်မိုးဦးက မန္တလေးမှာ ရှိတဲ့ မန္တလာဆေးရုံမှာ ခွဲစိတ်ကုသမှု ခံယူနေရတာပါ။ လက်ရှိကျန်းမာရေးအခြေအနေကတော့ ကောင်းမွန်းနေတာ တွေ့ရတယ်လို့ မျိုးမင်းစိုးက ပြောထားတာတွေ့ရပါတယ်။ ဒီဇိုင်နာ မျိုးမင်းစိုးက ဒီနေ့မှာ မန္တလာဆေးရုံမှာ ဆေးကုသမှု ခံယူနေရတဲ့ သရုပ်ဆောင် ထက်ထက်မိုးဦးဆီသို့ သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ ထက်ထက်ဆီသွားရင်းနဲ့ အားပေးစကားတွေလည်း …
ဂျပန်- မြန်မာ ချစ်ကြည်ရေးဇာတ်ကားမျိုး ရိုက်ကူးဖို့ ပြင်ဆင်နေတဲ့ ကိုပေါက် လက်ရှိမှာ အောင်မြင်နေတဲ့ Lady Boy ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကို ပုံဖော်ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဒါရိုက်တာ ကိုပေါက်က ထိုင်းမြန်မာ ချစ်ကြည်ရေး ဇာတ်ကားရိုက်ကူးပြီးနောက်မှာ ဂျပန်နဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားရိုက်ကူးဖို့ ပြင်ဆင်နေပါတယ်။ ဂျပန်-မြန်မာ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားရိုက်ကူးဖို့ အိပ်မက်ဟာ သူ့မှာအစကတည်းက ရှိခဲ့ပြီး အခု အဲဒီ အိပ်မက်ကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်တော့မယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ …
“မသေခင်လှူဒါန်းသွားချင်တယ်ဆိုတဲ့ဈေးသည်အဘွားရဲ့ဆန္ဒကို ဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့တဲ့ချမ်းမြေ့မောင်ချိုတို့ မောင်နှမ
“မသေခင်လှူဒါန်းသွားချင်တယ်ဆိုတဲ့ဈေးသည်အဘွားရဲ့ဆန္ဒကို ဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့တဲ့ချမ်းမြေ့မောင်ချိုတို့ မောင်နှမ Myanmar Time သတင်းဌာနကနေ အင်တာဗျူးမှာဖြေထားတဲ့ မသေခင်မှာ အလှူလုပ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့အဖွားအိုရဲ့ရုပ်သံဖိုင်ဟာ လူမှုကွန်ရက်မှာ ကြည်ရှု့သူများပြားခဲ့ပြီး လူပေါင်းများစွာ အဖွားကို ဂရုဏာသက်နေကြပါတယ်…. အဝေးရောက်မလှူနိုင်တဲ့သူတွေကလည်း အဖွားအတွက် တစ်ဆင့်လှူဒါန်းကြသလို ကိုယ်တိုင်သွားရောက်ပြီးလှူဒါန်းကြသူတွေလည်းရှိပါတယ်…. အဲဒီအထဲမှာ Myanmar Idol Season3မှာ ပရိသတ်အခိုင်အမာရရှိထားတဲ့ချမ်းမြေ့မောင်ချိုတို့ မောင်နှစ်မတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်… အဖွားထံကို ကိုယ်တိုင်သွားလှူခဲ့တဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ်အကောင့်ပိုင်ရှင် Thura …